Umlaza i-Aquarius: izici, imvelaphi kanye nezinganekwane | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Phakathi kwe izinkanyezi okubaluleke kakhulu egumbini lezulu lamazulu esilithola Umlaza i-aquarius. Ingenye yezinkanyezi eziyi-12 zezinkanyezi, okusho ukuthi itholakala kulayini olandelwa yilanga esibhakabhakeni. Ngenye yezinto ezibaluleke kakhulu njengoba kubhekwa futhi njengenye yezinkanyezi ezindala kakhulu. Kuyinhlanganisela yezinkanyezi esevele zivele ohlwini lwamaqoqo ezinkanyezi angama-48 abekwe ohlwini lwezinkanyezi u-Irrigation Ptolemy.
Ngakho-ke, sizonikezela le ndatshana ukukutshela konke odinga ukukwazi ngomlaza we-Aquarius.
2 Umsuka nezinganekwane ze-constellation Aquarius
3 Izinkanyezi zezinkanyezi ze-Aquarius
Lokhu kubalwa kwezinkanyezi kutholakala ku-zodiac ikakhulukazi endaweni eyaziwa ngokuthi ulwandle. Ulwandle lubizwa ngale ndlela njengoba lutholakala emkhakheni wezulu lamazulu lapho kuhlala khona izinkanyezi eziningana ezibhekisela olwandle. Isibonelo, sithola izinkanyezi ezinamagama oMkhomo, iDolphin, uFish no-Eridano. Umlaza i-Aquarius ungatholakala ku-quadrant yesine yezwe eliseningizimu. Yize kungabonakala kusuka kunoma iyiphi i-latitude njalo lapho izoba ngaphansi kwama-degree angama-65 enyakatho. Beyond ayikwazi ukuboniswa.
Itholakala eduze kweminye imilaza ehlanganayo, oKhozi, uCapricorn, uMkhomo, iDolphin, iHhashi, iPegasus, iNhlanzi, iSouthern Fish kanye neWorkshop yoMqophi. Ingabonakala ngeso lenyama njengoba inkanyezi yayo ebaluleke kakhulu ikhanya ngokugqamile kunezinye. Le nkanyezi iqanjwe ngeBeta Aquarii. Le nkanyezi igqame ngokuba nezinye izinto zezinkanyezi ngaphakathi kweqoqo lezinkanyezi. Phakathi kwalezi zinto zezinkanyezi sinamaqoqo embulunga yonke aziwa ngamagama kaMessier 2 noMessier 72, kanye nelinye iqembu lezinkanyezi elaziwa ngegama likaMessier 73. Kulesi sihlabani sithola neNaburn nebula yeHelix.
Umsuka nezinganekwane ze-constellation Aquarius
Le nkanyezi yaziwa kusukela ngekhulu lesi-XNUMX BC. Kwatholakala izazi zezinkanyezi zaseBabiloni. Le mpucuko yayijwayele ukuhlobanisa i-constellation Aquarius ne-God Ea. Lo Nkulunkulu wayemelwe ngomkhumbi ayethela kuwo amanzi. Esinye sezigameko esidalwe ukuhunyushwa koMhlaba yi-solstice yasebusika. Lo mcimbi ububaluleke impela selokhu wenzeka ngesikhathi kudlula umlaza i-Aquarius. Lesi yisizathu esenza ukuthi isikhathi esidlule phakathi kwezinsuku ezedlule nezinsuku zangemva kwenjikalanga yasebusika saziwa njengendlela ye-Ea.
Ukubaluleka kwalokhu uNkulunkulu kuqalile kusuka ukuhlanganiswa kwabaseBabiloni nemiphumela ebhubhisayo yemifula iTigris ne-Ewufrathe. Lokhu kusho ukuthi, njalo lapho le mifula idala izikhukhula nokubhujiswa, abaseBabiloni bahlobanisa lezi zinhlekelele nentando kaNkulunkulu Ea.
Enye impucuko enezincazelo ezinhle ngomlaza i-Aquarius ngowaseGibhithe. AbaseGibhithe bahlobanisa umlaza i-Aquarius nezikhukhula zeNayile minyaka yonke.Ngenxa yokugeleza kwalo mfula, bakwazile ukuzinisela ukunisela amasimu atshaliwe nokusebenzisa lawo manzi ukuze bawasebenzise. Ngokwesiko, ukuqala kwentwasahlobo kumakwa yi-constellation ka-Aquarius. Kuthiwa u-Aquarius wacwilisa ujeke wakhe eMfuleni iNayile futhi wabangela isikhukhula.
Enye impucuko ebhekise kulo mlaza yinkolelo yamaGreki. Kulenganekwane u-Aquarius ukhonjwa kuGanymede. UGanymede wayeyindodana eyiqhawe likaTros neNkosi uDardania. Ezinganekwaneni kuthiwa uGanymede wathunjwa nguZeus ukuze amguqule umphathindebe owayephethe ukukhonza abanye onkulunkulu base-Olympian. Kwezinye izinhlobo zale nsumansumane kuthiwa i-Aquarius yenkanyezi yavela njengesitsha esasithela amanzi siqonde enkanyezini yeNhlanzi yaseNingizimu.
Izinkanyezi zezinkanyezi ze-Aquarius
Yize ingenye yezinkanyezi ezisendaweni yezinkanyezi, iyindawo enezinkanyezi eziningi kakhulu. Ayinazo izinkanyezi eziningi kakhulu ezikhanyayo, kuphela izinkanyezi ezibizwa ngegama le-Alpha Aquarii neBeta Aquarii. Zonke ezinye izinkanyezi zinobukhulu ngokukhanya okungaphansi kuka-3. Sizokwazi kabanzi futhi yiziphi izici zezinkanyezi eziyinhloko zalesi sihlabani.
I-Beta Aquarii: Kuyinkanyezi ecishe ibe yiminyaka engama-540 yokukhanya kusuka kusistimu yelanga. Kuyaziwa ukuthi iyisidlakela esikhulu esiphuzi esinesisindo esilinganiselwa ukuthi singaba cishe izikhathi eziyisithupha kunelanga.
I-Alpha Aquarii: Lokhu kwaziwa futhi ngegama likaSadalmelik okusho ukuthi inhlanhla yenkosi ngesi-Arabhu. Kuyinkanyezi yesibili egqame kakhulu kule nkanyezi. Ubukhulu bayo obubonakalayo ngu-2.94. Itholakala ebangeni eliyiminyaka engu-520 yokukhanya ukusuka kusistimu yelanga.
IGamma Aquarii: Le nkanyezi inobukhulu obungu-3.85 futhi ingenye yezinkanyezi ezigqame kakhulu kule nkanyezi. Kuyaziwa futhi ngegama leSadachbia, okusho inkanyezi enenhlanhla yezindlu. Ingenye yezinkanyezi kanambambili inayo futhi itholakala ebangeni eliyiminyaka eyi-158 yokukhanya ukusuka kusistimu yelanga.
IDelta Aquarii: kuyinkanyezi yesithathu ekhanya kunazo zonke e-constellation i-Aquarius. Ithole igama elijwayelekile likaSkat okusho umlenze. Ubukhulu bayo cishe bungu-3.3 futhi butholakala ebangeni eliyiminyaka eyi-113 ukusuka kusistimu yelanga.
I-Zeta Aquarii: le nkanyezi akuyona futhi iyodwa. Yenziwe izinkanyezi ezimbili, yize kokunye ukubonwa kuthiwa kungenzeka ukuthi yenziwe ngezinkanyezi ezi-3. Igama layo lendabuko iSadaltager okusho ukuthi indawo yenhlanhla yomthengisi. Ubukhulu bayo cishe bungu-3.659 futhi butholakala ebangeni eliyiminyaka engu-92 yokukhanya ukusuka eMhlabeni.
Esinye sezici eziyinhloko zale nkanyezi ukuthi kutholakale inani elikhulu lama-exoplanet azungeze izinkanyezi zawo. Amaplanethi amane atholakele azungeza inkanyezi uGliese 876. Enye inkanyezi lapho amaplanethi amabili alingana no-Jupiter orbit yiGliese 849.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngomlaza we-Aquarius.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » Umlaza i-Aquarius